Guddiga Joogtada Golahashacabka Iyo Masuuliyiin Ka W/Dastuurka Ka Tirsan Oo Kulan Qaatay – Kalfadhi
Guddiga Joogtada Golahashacabka Iyo Masuuliyiin Ka W/Dastuurka Ka Tirsan Oo Kulan Qaatay
August 13, 2018 August 14, 2018 Kalfadhi
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka ayaa maanta xarunta Golaha Shacabka kula kulmay xubno uu hoggaaminaayay wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xuseen Cabdi Cilmi.
kulanka ayaa waxaa loogu hadlay halka ay marayaan hannaanka dib u eegista dastuurka, wada shaqeynta guddiyada dastuurka iyo wasaaradda dastuurka.
Wasaaradda dastuurka ayaa soo bandhigtay intii uu kulanka socday cutubyada lagu guuleystay in dib u eegis lagu sameeyo iyo kuwa hada ay dib u eegista ku socdaan.
Sidoo kale wasaaradda dastuurka ayaa soo bandhigtay jadwalka shaqada ee la xiriira howlaha dib u eegista iyo caqabadaha hor taagan in qodobada qaar dib u eegis lagu sameeyo.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xuseen Cabdi Cilmi ayaa sheegay in ay wadaan dadaalladii ugu dambeeyay ee dib u eegista loogu sameynayo dastuurka.
” Runtii wasaaradda dadaal ayey wadaa, Golaha Shacabka waxa ka codsanaya in wasaaradda dastuurka iyo guddiyada dhisan inaad kala shaqeysaan howlaha culus ee horyaallo, si loogu guuleysto in dastuur loo dhan yahay aan yeelano”. ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka.
xubnaha guddiga joogtada ee kulanka ka qeyb galay ayaa wasiir ku xigeenka iyo xubnihii la socday weydiiyay su’aalo ku saabsan cutubyada dib u eegista lagu sameeyay, sidoo kale waxa ay ku biiriyeen talooyinkooda.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulanka ka sheegay in ay muhiim tahay in si wadajir ah loo shaqeeyo.
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo kulanka soo xeray ayaa ku dheeraaday muhiimadda dastuurka iyo dardar gelintya howlaha dib u eegista.
Guddoomiyaha ayaa wasaaradda dastuurka faray iney shaqooyinka ay wadaan sii labada jibaaraan, golaha shacabkana ay usoo gudbiyaan warbixin dhameystir si waqtiga haray loogu faa’iideysto.
” Golaha shacabka waxa uu matalaa shacabka Soomaaliyeed, warbixinta aad maanta na siiseen ma ahan mid aan ku qanci karno mana aqbaleyno in howsha dib u eegista ay sidaan ku sii socoto, waxa rabnaa inad la timaadaan qorshe cad, golaha shacabka waxa uu diyaar u yahay inuu idiinla shaqeeyo habeen iyo maalin”. ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka.
Ugu dambeyn guddoomiye Mursal ayaa sheegay in guddiga joogtada ee golaha shacabka uu la xisaabtamayo wasaarada dastuurka iyo guddiyada ku howlan dib u eegista.
Dagaalka Soomaali-Galbeed & Oromada; Dagaal Isir Miyaa? Mise Dagaal Wakaaladeed?